सर्बोच्चको आदेशले केपी ओलीको हार भयो कि जीत? – Kavrepati
Home / समाचार / सर्बोच्चको आदेशले केपी ओलीको हार भयो कि जीत?
admin June 22, 2021	समाचार Leaveacomment 163 Views
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जितेका छन् कि हारेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । अदालतको आदेशपछि ओलीकै नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम हुने भएको छ । तर, उनीसँग भएका चार मन्त्रीले देशमा चुनाव कसरी गराउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, संसद विघटन र मध्यावधि चुनावविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले राजनीतिक जटिलतातर्फ धकेल्ने बताएका छन्। अदालतको फैसला अप्रत्यासित रहेको बताए।